शिशुहरूको टाईलेनल खुराक चार्ट वजन र उमेर द्वारा | एकलकेयर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
प्रेस समुदाय, कल्याण घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य कम्पनी औषधि बनाम मित्र समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार समाचार चेकआउट औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी मनोरञ्जन
मुख्य >> औषधि जानकारी >> शिशुहरूको टाईलेनोल खुराक गाइड: म कसरी मेरो बच्चालाई टाईलेनल दिन सक्छु?
शिशुहरूको टाईलेनोल खुराक गाइड: म कसरी मेरो बच्चालाई टाईलेनल दिन सक्छु?
फाराम र शक्तिहरू | शिशुहरूको टायलेनोल बनाम बच्चाको टाइलानोल | खुराक समायोजन | शिशुहरूको टाईलेनल कसरी प्रबन्ध गर्ने | प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
शिशुहरूको टायलेनोल (सक्रिय संघटक: एसिटामिनोफेन ) एक over-the-काउन्टर औषधी हो जुन अस्थायी रूपमा दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिन्छ र ज्वरो years बर्ष उमेरका बच्चाहरूमा। यसले केवल लक्षणहरूलाई राहत दिन्छ र कुनै पनि अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्थाको उपचार वा उपचार गर्दैन। शिशुहरूको टायलेनल बच्चाको तौल र / वा उमेरको आधारमा १.२25 देखि mill मिलिलिटर (एमएल) मापन गरिएको खुराकमा स्वादयुक्त मौखिक निलम्बनको रूपमा लिइन्छ। यो खाना बिना वा बिना लिन सकिन्छ।
सबै भन्दा राम्रो चीजहरु खान को लागी जब तपाइँ बिरामी हुनुहुन्छ
सम्बन्धित: शिशुहरूको टाईलेनल के हो? | शिशुहरूको टायलेनोल कुपनहरू
शिशुहरूको टायलेनोल फारम र शक्तिहरू
शिशुहरूको टायलेनल १ an० मिलीग्राम (मिलीग्राम) को घनत्वको साथ मौखिक निलम्बन हो एसिटामिनोफेन तरल को प्रति mill मिलीलीटर (एमएल) यो अंगुर, चेरी, र डाई-फ्री चेरी स्वादहरूमा उपलब्ध छ।
शिशुहरूको टायलेनोल बनाम बच्चाहरूको टाईनालोल खुराक
एसिटामिनोफेनको कम खुराकको रूपमा, शिशुहरूको टायनिनल ० र years वर्ष बीचका बच्चाहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ; जे होस्, हेरचाह गर्नेहरूले जहिले पनि २ बर्ष भन्दा कम उमेरको बच्चालाई एसिटामिनोफेन दिनु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ। Caregivers मानक वा सिफारिश खुराक भन्दा बढी हुनुहुन्न। एकल २ 24 घण्टा अवधिमा पाँच खुराक भन्दा बढि नगर्नुहोस्।
शिशुहरूको टाइलनोल खुराक वजन वा उमेर द्वारा निर्धारित गरिन्छ, तर तौल-आधारित खुराक सिफारिस गरिएको छ।
शिशुहरूको टाईलेनल खुराक वजन र उमेर द्वारा
तौल उमेर सिफारिश गरिएको खुराक
-11-११ एलबीएस ०--3 महिना डाक्टरलाई सोध्नुहोस्
१२-१-17 एलबीएस -11-११ महिना डाक्टरलाई सोध्नुहोस्
१-2-२3 एलबीएस १२-२3 महिना डाक्टरलाई सोध्नुहोस्
२-3--35 एलबीएस २- years बर्ष M एमएल तरल
को एफडीए २ भन्दा कान्छो बच्चालाई एसिटामिनोफेन दिनु अघि स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श गर्नुपर्ने महत्त्वमा जोड दिनुहुन्छ यदि शिशुलाई कलेजोको रोग, मृगौला समस्या, वा लिइरहेको छ भने तपाईले उचित डोजको बारेमा पनि डाक्टरसँग परामर्श लिनु पर्छ। warfarin , एक रगत पातलो औषधि।
बच्चाहरूको Tylenol शिशुहरूको टायलनोल (१ mg० मिलीग्राम / m एमएल) को समान बलमा उपलब्ध छ। भिन्नता यो हो कि शिशुहरूको टायनिनल मौखिक सिरिन्ज (प्याकेजमा शिशुहरूलाई प्रशासनका लागि) प्याकेज गरिएको छ र एकदेखि दुई औंस बोतलहरूमा उपलब्ध छ र बच्चाको टाइलनोल डोजि cup कपको साथ प्याक गरिएको छ र चार औंस बोतलमा उपलब्ध छ। शिशुहरूको टाईलेनल २ देखि years बर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई दिन सकिन्छ जब कि बच्चाहरूको टाइलनोल २ देखि ११ बर्ष उमेरका बच्चाहरूलाई दिन सकिन्छ। तसर्थ, त्यहाँ उत्पादनहरु बीच केही अतिच्छादित छ तर तिनीहरू बिल्कुल आदानप्रदान हुँदैनन्। टायलनोल खुराक बच्चाको वजन र उमेरमा निर्भर गर्दछ।
बच्चाहरूको Tylenol खुराक चार्ट
तौल उमेर सिफारिश गरिएको खुराक (तरल)
-4 36--47 एलबीएस -5-। बर्ष .5.। मिलि
-5 48--59 एलबीएस 8-8 बर्ष १० मिलि
-०-71१ एलबीएस 9-10 वर्ष १२..5 मिलि
-२-9595 एलबीएस ११ बर्ष १ m मिलि
शिशुहरूको टाइलनोल खुराक समायोजन
अस्थायीको लागि शिशुहरूको टाइलनोल प्रयोग गर्नुहोस् ज्वरो, चिसो, र सामान्य दुखाइ र पीडाबाट राहत फ्लूको कारण, चिसो, टाउको दुखाइ, दुखेको घाँटी , वा दाँत दुख्ने। यो ज्वरोका लागि पनि संकेत गरिएको छ। यद्यपि अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्स सिफारिश गर्दछ कि स्याहारकर्ताहरूले जहिले पनि बाल रोग विशेषज्ञसँग कुरा गर्छन् जब शिशुको मलाशय तापमान १० डिग्री डिग्री एफ भन्दा बढी हुन्छ।
बाल रोगीहरू : खुराक वजन मा निर्भर गर्दछ। एक डोज २ every घण्टामा अधिकतम पाँच खुराक (२ देखि aged वर्षका बच्चाहरूमा २ m एमएल) सम्म प्रत्येक चार घण्टा लिईन्छ।
बिरामी बिरामीहरू — खुराक आवृत्ति समायोजन :
१०-50० एमएल / मिनेटको क्रिएटिनिन निकासी: प्रत्येक six देखि hours घण्टामा सिफारिस गरिएको खुराक दिनुहोस्।
10 एमएल / मिनेट भन्दा कम क्रिएटिनिन निकासी: सामान्य सिफारिश खुराक हरेक आठ घण्टामा दिनुहोस्।
डायलिसिस बिरामीहरू: डायलिसिस पछि पूरक बिना प्रत्येक आठ घण्टा सामान्य सिफारिश खुराक दिनुहोस्।
हेपाटेली बिरामी बिरामीहरू — खुराक समायोजन घटाउँछ : उपयुक्त कम गरिएको खुराकका लागि बाल रोग विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोस्।
माथिको जानकारी Dosing Epocrates ।
कसरी बच्चाहरूलाई शिशुहरूको Tylenol दिने
शिशुहरूको टाइलनोल एक बच्चालाई एक मिटर मौखिक सिरिन्ज ड्रॉपर प्रयोग गरी दिइन्छ जुन औषधीको साथ समावेश छ। मौखिक सिरिन्जमा मार्कहरूले चार मानक मापनहरू संकेत गर्दछ: १.२25 एमएल, २. m एमएल, 75.7575 एमएल, र, एमएल। शिशुहरूको टाईलेनल children 35 पाउण्ड भन्दा बढी तौल हुने बच्चाहरूलाई प्रशासित गर्न सकिन्छ, यी बच्चाहरूलाई शिशुहरूको टायलनोल डोजिंग यन्त्रमा चिह्नित भन्दा ठूला खुराकहरूको आवश्यक पर्दछ। बच्चाहरूको टाइलनोल ठूला बच्चाहरूका लागि उपयुक्त डोजि cup कपको साथ आउँदछ।
उपयुक्त खुराक खोज्नुहोस् प्याकेज वा प्याकेज सम्मिलित गरिएको चार्टमा छाप्नुहोस्, वा निर्देशनका लागि बाल रोग विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोस्।
वजन द्वारा खुराक प्राथमिकता छ, तर यदि तपाईं वजन थाहा छैन, उमेर अनुसार खुराक।
प्रयोग गर्नु अघि बोतललाई राम्रोसँग हल्लाउनुहोस्।
सम्पूर्ण हावालाई मौखिक सिरिन्जबाट पुश गर्नुहोस् पूर्ण रूपमा निराश गरेर।
बोतलबाट बच्चा प्रतिरोधी टोपी हटाउनुहोस्।
बोतल खोल्नमा मौखिक सिरिge टिप घुसाउनुहोस्।
बोतल खोल्नेमा मौखिक सिरिge सल्लाहको साथ, बोतललाई माथि तल फ्लिप गर्नुहोस्।
सही डोजमा मौखिक सिरि fill भर्न प्लन्गर तान्नुहोस्।
मौखिक सिरिन्ज हटाउनुहोस् र टिप्स बच्चाको मुखमा राख्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि बच्चा वा शिशु ठीक छ औषधि दिनु अघि
तरल पदार्थ बिस्तारै बच्चाको भित्री गाल तर्फ फैलाउनुहोस्।
बच्चा प्रतिरोधी टोपी कसर बदल्नुहोस्।
प्रत्येक चार घण्टामा दोहोर्याउनुहोस् यदि लक्षणहरू रहिरह्यो भने।
एकल २ 24 घण्टा अवधिमा पाँच भन्दा बढि खुराक नदिनुहोस्।
शिशुहरूको टायलोनोल प्रबन्ध गर्दा, तपाईं निम्न सुरक्षा र प्रभावकारिता सल्लाहहरूको बारेमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ:
सबै अन्य औषधिहरू जाँच गर्नुहोस् जुन बच्चालाई एसिटामिनोफेन समावेश गर्दैन भनेर निश्चित गर्न दिइन्छ। शिशुहरूलाई टाईलेनोल दिंदा, छैन कुनै पनि अन्य औषधीहरू प्रशासित गर्नुहोस् जसमा एसिटामिनोफेन हुन्छ।
बोतलमा सँधै म्याद सकिने मिति जाँच गर्नुहोस्। यदि औषधिको म्याद समाप्त हुने मिति सकिसक्यो भने, यसलाई सुरक्षित रूपमा निकाल्नुहोस् र नयाँ बोतल खरीद गर्नुहोस्।
बोतललाई जहिले पनि हल्लाउनुहोस् यदि होईन भने, अन्तिम खुराकमा एसिटामिनोफेनको उच्च एकाग्रता हुनेछ र अधिक मात्रामा नतीजा हुन सक्छ।
बच्चाको उमेर भन्दा वजनको आधारमा डोज निर्धारण गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, शिशुहरूको टाईलेनोल वितरण गर्नु अघि तपाईंको बच्चालाई तौल गर्नुहोस्।
सधैं सही मापन गर्न मौखिक सिरिन्ज प्रयोग गर्नुहोस्। घरगुती / भान्छाको माप गर्ने चम्मच, नाप्ने कप, वा अन्य उपकरणहरू प्रयोग नगर्नुहोस् - ती औषधि नाप्न सही छैनन्। यदि तपाईंले मौखिक सिरिन्ज हराउनु भयो भने, तपाईंको फार्मेसीले प्राय: डोजि sy सिरिंज प्रदान गर्दछ कुनै शुल्क बिना।
यदि सम्भव छ भने, अर्को वयस्कलाई बच्चालाई औषधि दिनु अघि डोजिंग चार्ट र मापन गरिएको डोज जाँच गर्नुहोस्।
प्रत्येक खुराकको लागि, क्यालेन्डरमा समय रेकर्ड गर्नुहोस् वा तालिकामा निश्चित गर्नुहोस् कि अर्को खुराक एकदम चाँडो दिइएन।
यदि शिशुले औषधि बाहिर थुक्छ भने निलिंग सहज पार्न एक खुराक दिंदा शिशुको गाला बिस्तारै निचोल्न कोशिस गर्नुहोस्।
यदि शिशु स्वादको बारेमा उदास छ, यसलाई स्वादयुक्त पेयमा थप्नुहोस्। चिसो पेय पदार्थहरू विशेष गरी जिब्रोलाई अलिकता सुस्त पार्ने छ र कुकुरका स्वादहरू शिशुले मनपर्दैन।
शिशुहरूको टाइलनोल खुराक FAQ हरू
यसले शिशुहरूको टायलनोललाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
शिशुहरूको टायलनोलले काम सुरु गर्न 30० देखि minutes 45 मिनेट लिन सक्दछ। अधिकतम प्रभाव एक घण्टा मा हासिल गरीनेछ।
शिशुहरूको टायलोन तपाईंको प्रणालीमा कति लामो समय सम्म रहन्छ?
सिफारिश गरिएको खुराकमा, शिशुहरूको टायलेनोलको प्रभाव चार देखि छ घण्टासम्म रहनु पर्छ। जे होस्, शिशुको शरीरबाट एसिटामिनोफेन खाली गर्ने क्षमता तिनीहरूको उमेरमा निर्भर गर्दछ र समान उमेरका बच्चाहरूमा व्यापक रूपमा भिन्न हुन सक्दछ।
हेल्थकेयर पेशेवरहरूले मादक पदार्थ शरीरमा रहन कसरी लामो हुन्छ भनेर नाप्छआधा जीवन, त्यो हो, शरीरको लागी लाग्ने समयको मात्रा शरीरमा औषधीको आधा मात्रा हटाउन। सामान्यतया यो शरीरबाट एक ड्रग खाली गर्न को लागी पाँच देखि छ आधा जीवन लिन्छ।एसिटामिनोफेनको आधा जीवनदुई देखि चार घण्टा हो, तर उमेर वा अन्य कारकहरू (जस्तै कलेजुका समस्याहरू) अनुसार फरक हुन सक्छ। यस भिन्नताको कारण, खोजीमा रहनुहोस् शिशु एसिटामिनोफेन विषाक्तताको संकेत जस्तै निद्रा, सुस्ती, बान्ता, र कम प्रतिक्रियाशीलता।
यदि मेरो बच्चाले शिशुहरूको टाईलेनलको एक खुराक हरायो भने के हुन्छ?
तपाईले छुटेको खुराक कुनै पनि समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई लिने तालिका पछि। खुराक हराउनुले डोजि reset्ग रिसेट गर्दछ, त्यसैले अर्को खुराक चार, छ, वा आठ घण्टा लिनु पर्दछ मिस गरेको डोज प्रशासित गरेपछि। यदि तपाईंको प्रश्नहरू छन् वा स्पष्टीकरण आवश्यक छ भने तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् यदि एक शिशु थुक्छ वा शिशुको टाइलनोलको एक खुराक खान्छ भने। निर्माताले सुझाव दिन्छ कि कुनै थप औषधि दिइनेछ र अर्को निर्धारित खुराक सम्म प्रतिक्षा गर्नुहोस्। पेडियाट्रिक्स को अमेरिकी एकेडेमी सल्लाह दिने आमा वा बुबाले बाल रोग विशेषज्ञलाई परामर्श लिनु पर्छ के गर्ने यदि एक बच्चा बाहिर थुक्छ वा औषधि बान्ता गर्छ भने के गर्ने भनेर। एक डाक्टरले शिशुको एसिटामिनोफेन सपोसिटरीहरू जस्तै फिभरआल शिशुहरूको सपोसिटरीजमा स्विच गर्न सल्लाह दिन सक्छ यदि थूक आउट गर्ने वा बान्ता गर्ने औषधि समस्या हो।
कसरी मेरो बच्चाले शिशुहरूको टाइलनोल लिन रोक्दछ?
यदि छोटो अवधिको लागि सिफारिश गरिएको खुराकमा लिइयो भने, एसिटामिनोफेन कुनै समस्या बिना बन्द गर्न सकिन्छ।
शिशुहरूको टायलेनोलको प्रयोग बन्द गर्नुहोस् यदि दुखाइ वा ज्वरो बढ्छ वा दुई दिन भन्दा बढि रहन्छ भने। साथै, शिशुहरूको टायलेनोलको प्रयोग रोक्नुहोस् र एलर्जी छालाको कुनै लक्षण जस्तै लालिमा, सूजन, दाग, वा छालामा तत्काल चिकित्सा उपचार खोज्नुहोस्।
शिशुहरूको टाइलनोलको सट्टा के प्रयोग गर्न सकिन्छ?
NSAIDs (नन्स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स) जस्तै मोट्रिन शिशु ड्रप ( शिशुहरूको आइबुप्रोफेन ) शिशुहरूको टाइलनोलको ठाउँमा Inf महिना वा सोभन्दा ठूलो बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नोट: Aspirin एक भाइरल संक्रमण एक बच्चा को लागी कहिल्यै दिनु हुँदैन, यो कारण हुन सक्छ रेयको सिन्ड्रोम । सिफारिसको लागि आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई मार्गदर्शन चाहिएको छ भने।
शिशुहरूको टाईलेनलका लागि अधिकतम खुराक के हो?
प्याकेजि to्ग सन्दर्भ गर्नुहोस् वा टायलनोल डोजको बारेमा थप जानकारीको लागि तपाईंको बच्चाको बाल रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिनुहोस्। एकल २ 24 घण्टा अवधिमा पाँच भन्दा बढि खुराक नदिनुहोस्। कलेजो समस्या वा मिर्गौला समस्या भएका बिरामीहरूलाई कम खुराक र / वा परिमार्जित खुराक तालिका आवश्यक पर्दछ।
शिशुहरूको टायलोनोलसँग के कुराकानी हुन्छ?
एसिटामिनोफेनले कलेजोलाई बिगार्न सक्छ, त्यसैले थप सावधान हुन एसिटामिनोफेन युक्त अन्य ड्रग्स त्याग्नुहोस् जब शिशुहरूलाई टाईलेनोल दिनुहुन्छ। धेरै ओभर-द-काउन्टर चिसो, फ्लू, र अन्य संयोजन औषधिहरूमा एसिटामिनोफेन हुन्छ। बहु ओभर-द-काउन्टर औषधिहरूको प्रयोग शिशुहरू र बच्चाहरूमा अनजाने एसिटामिनोफेन विषाक्तताको एक सामान्य कारण हो। यस अनुसार एफडीए , खोकी र चिसो औषधि २ बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यसैले उपयुक्त र सुरक्षित उत्पादन चयनको सन्दर्भमा तपाईंको बच्चाको बाल रोग विशेषज्ञको परामर्श लिनुहोस्।
१ बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरूमा, सामयिक लिडोकेन वा बेंजोकेन उत्पादनहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। शिशुहरूको टायलनोलसँगको संयोजनले गम्भीर रक्त विकार निम्त्याउन सक्छ जुन मेथेमोग्लोबिनेमिया भनिन्छ। यदि बच्चा १ बर्ष भन्दा बढी उमेरको छ भने, शिशुहरूको टाइलनोल र सामयिक सन्निक उत्पादनको उपयोग गर्नु अघि बच्चाको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
venlafaxine एक औषधि परीक्षण मा देखाउँछ
केही औषधीहरू एसिटामिनोफेनसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्, विषाक्त मेटाबोलिट सिर्जना गर्दछ र कलेजो बिग्रने जोखिमलाई बढाउँछ। उदाहरणका लागि, फिनोबार्बिटल वा कार्बामाजेपाइन। यदि तपाईंको शिशुले कुनै पनि औषधि औषधीहरू लिन्छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् त्यहाँ कुनै औषधि अन्तर्क्रिया हुँदैन।
खानाले सामान्यतया तरल एसिटामिनोफेनको शोषणलाई असर गर्दैन। यद्यपि क्रूसिफेरस तरकारीहरू Ab क्याबेज, ब्रोकोली, काले, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, र यस्तै खानेकुरा — शरीरको एसिटामिनोफेन बिच्छेदको गति बढाउन सक्छ, यसको प्रभावकारिता कम गर्न।
शिशु र बच्चाहरूको लागि एसिटामिनोफेन खुराक ,म्याकनेल उपभोक्ता उत्पाद कम्पनी
शिशुहरूलाई एसिटामिनोफेन दिनु अघि एकाग्रता जान्नुहोस् , एफडीए
खुराक सही भयो: बच्चाहरूलाई दुखाइ दिने औषधी दिनु अघि लेबलहरू पढ्नुहोस् , अमेरिकन पेडियाट्रिक्स एकेडेमी
शिशुहरूको टायलेनोल (एसिटामिनोफेन) मोनोग्राफ , Epocrates
शिशुहरूको टायलेनल मौखिक निलम्बन ,म्याकनेल उपभोक्ता उत्पाद कम्पनी
कसरी तपाइँको बच्चा शिशुलाई Tylenol दिन ,म्याकनेल उपभोक्ता उत्पाद कम्पनी
सामान्य प्रतिकूल घटनाहरू र ओटीसी दर्द औषधिहरूको साथ अन्तर्क्रिया , संयुक्त राज्य अमेरिका फार्मासिष्ट
बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा एसिटामिनोफेन विषाक्तता क्लीभल्यान्ड क्लिनिक
प्रारम्भिक शिक्षा र बाल हेरचाह सेटिंग्समा औषधि प्रशासन , अमेरिकन पेडियाट्रिक्स एकेडेमी
बच्चाहरूलाई खोकी र चिसोको लागी औषधी दिने कब , एफडीए
मानवमा क्रूसिफेरस बोटबिरुवाको सुरक्षा , बायोमेडिसिन र बायोटेक्नोलजीको जर्नल
बच्चामा हात, खुट्टा, र मुख रोगको लागि अभिभावकको गाईड
4 दिन मा 11 पाउण्ड गुमाउनु हुन्छ? एक नयाँ अध्ययन छिटो वजन घटाने सम्भव छ भन्छन्
के पुरुष एन्टिबायोटिक बाट खमीर संक्रमण प्राप्त गर्न सक्छन्?
स्तनपान को बेला यो जन्म नियन्त्रण लिन सुरक्षित छ
तपाइँ तुरुन्तै तपाइँको रक्तचाप कम गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ?
एक tsh रगत परीक्षण के देखाउँछ